TrueReview: Unganidza Ongororo Nyore Uye Kukura Bhizinesi Rako 'Mukurumbira uye Kuonekwa | Martech Zone
Mangwanani ano ndanga ndichisangana nemutengi ane nzvimbo dzakawanda dzebhizimusi ravo. Kunyangwe kuoneka kwavo kwehupenyu kwaityisa kune yavo saiti, kuiswa kwavo muGoogle Mepu kurongedza chikamu chaive chakanakisa.
Iyo nuance iyo mabhizinesi mazhinji asinganyatsonzwisisa. Dunhu rekutsvaga injini mhedzisiro mapeji ane matatu makuru zvikamu:
Kutsvaga Kunobhadharwa - inoratidzirwa nemavara madiki anoti Ad, iwo ma ads anowanzo kuve akakwirira kumusoro kwepeji. Aya mavara ano bhidha mune chaiyo-nguva uye mushambadzi anobhadhara nekudzvanya kana kufona.
Mepu Kurongedza - mepu yakakosha-chikamu chakakomba chikamu cheiyo peji uye vanoratidza iwo mabhizinesi, ratings yavo, uye nerumwe ruzivo. Chinzvimbo muchikamu chino chinotariswa nebhizinesi 'ratings, ongororo, uye chiitiko mukudhinda kune yavo Google Bhizinesi peji.
Organic Kutsvaga - pazasi pe peji pane zvakasikwa mhedzisiro, zvinongedzo kune chaiko webhusaiti yemakambani akaiswa indexed, uye zvinomisikidzwa mushe pamatemu akapindwa nemushandisi wekutsvaga injini.
Kutonga iyo SERP Mepu Pack
Sezvauri kuona zvakatsanangurwa pamusoro… mukurumbira wedomain yako maringe nemukurumbira unoenderana neongororo uye chiitiko pane peji rako reGoogle bhizinesi zvakasiyana zvachose. Muchokwadi, unogona kuva zvachose pasina imwe (kunyange ini ndisingazvikurudzire).
Chikonzero chakaita kuti mutengi uyu aite nemazvo ndechekuti makore mashoma apfuura vakaisa maitiro munzvimbo yekukumbira wongororo dzepamhepo kubva kune wese mutengi wavakashandira. Sezvo pavakatanga kuunganidza ongororo… vakatanga kuona huwandu hwevanotumirwa hunowedzera kubva kunjini dzekutsvaga.
Kana iwe uri wekupa sevhisi webasa kana yekutengesa chitoro, wongororo dzakakosha kune ako edhijitari ekushambadzira ekuedza. Hausi chete iwo mhinduro yakanaka yekuvandudza bhizinesi rako, kusimudzira wongororo yakasarudzika kunokwezva vatengi vachiwedzera. Kana iwe usina nzira yekutora zvirinyore kuongororwa, iwe unofanirwa zvachose kunyorera kune sevhisi senge TrueReview.
TrueReview Ongororo Yekuunganidza Zvimiro
TrueReview zvinoita kuti zvive nyore kumabhizinesi kukumbira wongororo kune chero webhusaiti, gamuchira yakananga mutengi mhinduro, uye nekuvandudza online ongororo. TrueReview inogonesa mabhizinesi kutumira mameseji eSMS neemail kana zvikumbiro zvekuongorora, zvichiita kuti zvive nyore kuti vatengi vape mhinduro. Zvakanakisisa pane zvese, unogona kukamura ongororo dzisina kunaka kuti uone kuti dambudziko ragadziriswa.
SMS Inokumbira - Tumira zvikumbiro zveSMS zvakagadziriswa kubva padheshibhodhi rako. Vatengi vako vanogashira tsika yekubatanidza kuti vasiye ongororo pane mawebhusaiti iwe aunotsanangura.
Email Zvikumbiro - Tumira zvakatemwa Email ongororo zvikumbiro kubva padheshibhodhi rako. Vatengi vako vanogashira tsika yekubatanidza kuti vasiye ongororo pane mawebhusaiti iwe aunotsanangura.
Tumira Zvikumbiro Zvakawanda - Kutumira zvikumbiro zvekudzokorora imwe neimwe inotora nguva. Tumira shamwari dzako ne CSV uye utumire mazana ekukumbira zvikumbiro kamwechete.
Donhwe Campaigns - Tora zvakawanda kubva kubvunzo yako yekukumbira nekumisikidza mameseji eSMS neemail. TrueReview inoita kuti ive yakapusa kuita mishandirapamwe yekudonhedza vatengi vako.
Dzivisa Negative Ongororo - Vatengi vanofara vanosiya wongororo uye avo vasina kugutsikana vanogona kupa mhinduro dzakananga, kana kukubatai kuti mugadzirise zvinhu. Usarega vatengi vakashatirwa vachisiya wongororo dzakaipa uye vachikuvadza mukurumbira wako wepamhepo!
Unganidza Mhinduro - Ratidza mawebhusaiti ako ekuongorora kana mhedzisiro yekuongorora iri yakanaka, kana kupa nzira inokurumidza kune vatengi vako kuti vape mhinduro yakananga kana mhedzisiro yeongororo yanga isina kunaka.
Ongorora Sites - Wongorora masayiti akatogadzirirwa anosanganisira Google, Facebook, Yelp, Angie's Chinyorwa, Makona mana, Yero Mapeji, Zillow, Kambasi, Realtor.com, Redfin, Amazon, uye zvimwe. Uye kana imwe isipo, iwe unogona kuwedzera tsika yekuongorora chinongedzo!
Wona uye Pindura - Ne TrueReview, unogona kuona nekupindura kune ako ese maongororo ari mukati meplatform yavo.
Kubatanidzwa - Unganidza yako yaunofarira CRM software kuti utumire zvikumbiro kune vatengi vako, kana kugadzira matsva ekutaurirana mune rako rekubata peji pese paunopedza basa, vhara tikiti, ubhadharwe sevhisi, uye zvimwe zvakawanda! Kubatanidzwa kunosanganisira GoCanvas, Setmore Kusarudzwa, Google Contacts, Housecall Pro, Square, Jobber, Real Estate Webmasters, ServiceTitan, Mailchimp, Google Sheets, Hubspot, Acuity Scheduling, LionDesk nezvimwe.
Tanga Mahara 14-Mazuva Ekuyedza
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we TrueReview uye kushandisa yangu yakabatana chinongedzo muchinyorwa chose.
Tags: Acuity Kurongahombe ongororo zvikumbirounganidza wongororomhinduro yemutengiemail wongororoGoCanvasGoogle ContactsGoogle SheetsitiHousecall ProhubspotJobberShumbaDeskmailchimpmepu kurongedzawongororo dzisina kunakaOngororo dzepamhepoReal Estate WebmastersReviewsServiceTitanSetmore Kugadzwasms wongororosquaresurveytruereview